Nwa akwụkwọ FUTO chọrọ igbu enyi ya n’ihi ego yahoo | odumblog
Nwa akwụkwọ FUTO chọrọ igbu enyi ya n’ihi ego yahoo
posted on Jul. 10, 2019 at 8:59 am
Chi bọọ. anụ ọzọ bụ ọnọdụ Naijiria ugbu a. Nwata akwụkwọ nke Federal University of Technology Owerri (FUTO) nke na-agụ Biological Sciences ka e jidere ebe ọ na-achọ iji nwata akwụkwọ ibe ya agwọ ọgwụ (yahoo plus).
Ihe a mere na ebe obibi ha a na-akpọ Bliss Mansion nke nọ n’Ụmụchịma, Owerri. O kwuru na ihe mere o jiri chọọ ime ihe dị otu a bụ ka ‘Yahoo business’ ya nwee ike na-aga nke ọma.
N’ịkọwa otu ihe siri mee, onye akaara iji agwọ ọgwụ ego a nke a na akpọ Daniel kwuru na enyi ya nwoke kpọrọ n’abalị rịọ ya ka ọ bịa hie na nke ya n’ihi mmekọrịta ya na ndi uwe ojii nwere. Daniel kwuru na mgbe ọ kụrụ elekere iri na abụọ nke ime uchichi, enyi ya biakutere ya n’akwa ya, gwa ya ka egwu o na-akpọ ekwegi ya hie ụra.
Ka anọtụrụ nwantinti oge, enyi nwoke Daniel bidoro ibeku ndi mmuo. Na mbu, Daniel chere na o na-egwu egwuregwu mana mgbe o doro ya anya na ugo eberela na mmagbu bụ mgbe ọ jụrụ ihe mere o hibeghi ụra. Daniel gwara ya na mgbe ọ bụla ụra jiri tụọ ka ọ ga -arahụ ụra; mana n’ime obi Daniel, ọ na-ekpe ekpere.
Mgbe ọ kụrụ elekere abụọ nke ụtụtụ, o bidoro kụwa Daniel ihe. Ma ọ gwara Daniel na o nweghi onye ga-anụ olu ya mgbe Daniel bidoro iti mkpu. Mgbe o jiri ọkara gafee elekere abụọ nke ụtụtụ, ndi agbataobi pụtara bịa zọpụta ya. Daniel kwuru na ọ bụ amara Chineke mere o jiri nwee ike igbape ụzọ.
Lee akụkọ a n’ihe onyonyo:
Tags:EducationEFCCfutofuto studentfuto student uses friend for money ritualfuto students caughtNigeriaYahooyahoo plus
Onuorah Jennifer July 10, 2019
Anambra na Rivers enwela kọmishọna ndi uwe ojii ọhụrụ
AFCON 2019: South Africa kwetara na ha ma ụzọ ha ga-eji merie Naijiria: Segun Odegbemi
Download Mp3: Odumeje ft. Flavour – Umu Jesus
Odum Blog2 weeks ago